Ticha wekurova mwana akumbira ruregerero | Kwayedza
Ticha wekurova mwana akumbira ruregerero
01 Apr, 2021 - 18:04 2021-04-01T18:54:13+00:00 2021-04-01T18:54:13+00:00 0 Views
Monalisa Chitwehwe (kurudyi) nemwana wake Onismus Chithwe (kuruboshwe)
TICHA wekuzvambaradza mwana weGrade 7 pachikoro cheFungisai Government Primary School, kuChitungwiza anonzi akazokumbira ruregerero zvikaita kuti vabereki vemwana uyu vabvise nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Onismus Chitebwe ndiye akarohwa nemurairidzi wake, akangozivikanwa nekunzi Sibanda, achipomerwa mhosva yekutaura mukirasi neyekusadarika mutsetse pakunyora rondedzero mubhuku.
Nyaya iyi yakasvitswa mumaoko emapurisa ndokuendeswa kumatare edzimhosva.
Zvisinei, amai vemwana uyu – Mai Monalisa Chitebwe (41) – vanoti vakazosarudza kuita hurukuro nemurairidzi uyu kunze kwedare (out of court settlement) nemusi wa31 Kurume apo nyaya iyi yaifanirwa kupinda mudare.
“Nyaya iya takazotaurirana kunze kwedare nokuti murairidzi akanga ava kuda kutondipa mari yandakarapisa mwana ndikavati regai henyu nokuti ndakangobhadhara $160 kuChitungwiza Central Hospital uye mapiritsi ekunyaradza marwadzo. Vamwe vanhu vari kufunga kuti ndakatengwa nemurairidzi uyu asi kwete, zvakabva mumwoyo wangu kuti ndiregerere mudzidzisi uyu. Ndakangoona kuti tiri vanhu tinotadzirana asi kana munhu akumbira ruregerero tinoregererana,” vanodaro.
Mwana uyu anoti akarohwa nefan belt kumagadziko kanokwana ka65 mumazuva maviri zvakaita kuti apedzisire ave kutadza kugara.
Vanhu vakawanda vakashoropodza zvikuru murairidzi uyu pamadandemutande anosanganisira Facebook neTwitter pakabuda nyaya iyi muKwayedza.
‘Toti suweji apa kune Covid-19...08 Apr, 2021
‘Covid inogona kunyukazve’08 Apr, 2021
Fodya yotanga kutengeswa 06 Apr, 2021
‘Toti suweji apa kune Covid-19’
Fodya yotanga kutengeswa
NUST yogadzira midziyo yePCR
Mawere ochema neCovid-19
Kudzoka kwenhabvu kworumbidzwa
Mahwindi baiwai jekiseni: Masvinu